Minnesota Operation Lifesaver, Inc. : Xaqiiqada iyo Tirokoobka ( Mareykanka iyo Minnesota) In English
Xaqiiqada iyo Tirokoobka ( Mareykanka iyo Minnesota)
Caadi ahaan, dadka ku dhinta shilka isgoysyada jidadka tareenka ayaa ka badan dadka ku dhinta shilka diyaaradaha rakaabka.
Marka uu tareenku ku dhaco baabuur, waxay u dhigantaa baabuur dulmaray qasac soodha ah.
Tareenka caadiga ah miisaankiisu waxa uu u dhigmaa culayska 4,000 ee gaari oo la isu geeyay.
Seddex meelood-labo (ka mid ah) ee shilalka isgoysyada Mareykanka ka dhaca waxay dhacaan maalin cad.
Qiyaas ahaan labo saac ee kasta, baabuur ama qof lugeynaya ayaa waxaa ku dhaca tareen dalka Mareykanka; celcelis dhan 12 shil maalin kasta.
Waxaa lagu helay tirokoob horudhac ah oo ay samaysay Waaxda Maamulka Jidadka Tareenada: in sannadkii 2010, 262 qof lagu dilay shil halka 836 uu ka soo gaaray dhaawac helis ah 2,013 ee shil ee ka dhacay isgoys ee jidadka tareenka (kuwaass oo isugu jira isgoysyada dadweynaha iyo kuwa gaarka ah).
Sannadkii 2010, 2 qof ayaa ku dhimatay 18 na way dhaawacantay 43 shil ee ka dhacay isgoysyada jidadka tareenka ee Minnesota. Sannadkii 2010, wadanka Mareykanka 443 qof ayaa ku dhimatay ayagu oo si aan sharci ahayn u goynaya wadada tareenka waxaana ka mid ahaa 3 qof ee reer Minnesota ah. Waxaa dhaawacmay 390 qof ayaga oo wadada khalad u goynaya waxaana ka mid ahaa 6 qof ee reer Minnesota ah.
Baabuuuraydu waxa ay 20 jeer khatarta ay ku jiraan in ay shil tareen ku dhintaan ka badanyihiin midka ka imaan kara shil gaari kale. Isku dhaca baabuurta iyo tareenku badankiisu waxa uu ka dhacaa 30 mayl in u jirta guriga darawalka. Kala bar in ka badan shilalka isgoysyada waxa ay dhacaan tareenka oo ku socda 30 mayl ama ka yar saacaddii.
Minnesota waxaa ka shaqeeya 20 waddo ee tareenka xamuulka ah, traeeka Amtrak ee dadka iyo jidka tareenka fudud ee Haiwatha.
Waxaa Minnesota ka jira 4,450 ee waddo tareen ee ganacsi. Haddii aad isku daba taxdid wadooyinka tareenka ee Minnesota gees-ka-gees, waxa ay la mid tahay adiga oo tareen ka raacay Minnesota una raacay Washington D.C kana soo noqday labo jeer.
Dalka Mareykanka waxaa jira qiyaas ahaan 203,000 ee isgoys ee hayway-iyo tareen oo isigu jira kuwo gaar ah, kuwo dadweyne iyo kuwa dadka lugta ah maraan.
Qiyaastii 30% ee isgoysyada dadweynaha ee Minnesota waxa ay leeyihiin nalalka digniinta oo shaqeeya.
Laga soo Xigtay: Maamulka Wadooyinka Qaranka
Waaxda Gaadiidka ee Minnesota
Nabadgalyada Asaasiga Marka la Gudbayo Isgoysyada Jidadka Tareenka
Calaamadaha iyo Ishaarooyinka
Gudubka Jidka Taareenka
Intee ayay ku Qaadataa in Tareenku Joogsado?
Meeraysi Dhul (Trespassing)